China steel wedge emepụta na suppliers | Bocheng Co-ihe okike
A na-ejikarị osisi wedge eme ihe na oge izizi nke ụlọ ọrụ ike iji dozie ihe ndị yiri nke ígwè ma ọ bụ iji wụnye ma dozie akụrụngwa akụrụngwa na akụrụngwa igwe. A na-ejikarị ígwè oblique ígwè mee ihe maka ntinye na nhazi nke nchara ígwè, yana ntinye na nhazi nke akụrụngwa; ihe e ji mara ya bụ: ezigbo ala, nkenke dị elu, enweghị ọkụ gburugburu, ezi ike, na ịdị mfe iji
Nka na ụzụ chọrọ maka Steel wedge: a na-ekpebi ihe ziri ezi dị ka mkpa si dị, n'ihi na wedge n'ozuzu ya na-eji akụkụ elu na nke ala, ya mere ihe ndị a chọrọ maka akụkụ anọ n'ozuzu adịghị elu, na ike ike nke osisi wedge ahụ bụ 6.4; Nsogbu nke elu na ala ala nke wedge ahụ bụ 12.5, 6.4, 3.2, 0.8, wdg, ma ọ bụrụ na ihe ziri ezi dị elu, ịdị nro na ihe yiri nke wedge ígwè nke grinder na-arụ nwere ike ghara ịgafe 0.03mm. Enwere ike ikpebi ọkpụrụkpụ nke wedge ígwè dị ka mkpa n'ezie na ihe na nkọwapụta nke ihe ahụ; mkpọda nke ígwè wedge kwesịrị 1 / 10-1 / 20, nchara wedge nke vibration ma ọ bụ nkenke akụrụngwa The mkpọda nke shim) nwere ike 1/40. Mgbe ị na-eji osisi wedge ígwè, a ga-eji ya na njikọta nke ewepụghị ọkwa nke otu nkọwapụta. A ga-eji nchara nchara mee ụzọ abụọ. E kwesiri iji otu mkpọda.
A na-eme ihe osise nke osisi wedge ahụ dị ka ihe eji arụ ọrụ dị mkpa, wee weezie ya dị ka eserese ahụ.
Otu esi eji wedge ígwè
Debe shim na-ebu ọnụ n’akụkụ ntọala ya, wee debe ya na nchara nchara nchara nchara ahụ. Mgbe ị na-agbanwe, jiri hama kụọ mgbatị ígwè abụọ, a na-eji mkpọda nke osisi ahụ iji bulie ma ọ bụ belata akụrụngwa iji nweta nzube nke ịhazi ọkwa ahụ. Mgbe a gbanwere ọkwa ahụ, ntụpọ ahụ na-eme ka ọkpụkpụ ahụ na-arụ ọrụ iji mee ka shim dị ike. N'ikpeazụ, a na-agbanye ya na ihe iji mee ka akụrụngwa dị na ọkwa dị mma n'oge ọrụ, belata igwe na akwa, ma belata ọnụahịa nke dochie akụkụ akụrụngwa.
Nke gara aga: Aka scraped igba ígwè elu efere
Osote: Lapping nkedo ígwè elu efere
Aka scraped igba ígwè elu efere